Successo ieri, Sangue e lacrime trasudano dall'icona di Cristo (video) | Ilblogdellapreghiera
O mere ụnyaahụ, Ọbara na anya mmiri na-esite na akara ngosi Kraịst (vidiyo)
Onye odeakụkọ ịgba akaebe:
Onye na-agụ akwụkwọ na-ekwu na ọ gụọla akụkọ mgbasa ozi Gris na akara ngosi ọbara dị n'ime ụlọ ekpere a na-elekọta ndị agadi ebe ahụ. N'okwu a, ya mere, ụlọ ndị nọọsụ bụ ebe ọnwụ pụrụ iche na ahụhụ maka Covid-19, yabụ enwere ike ịkọwa ọrụ ebube dịka ihe ama na Kraịst na-arịa ha.
Ekwere m na ụfọdụ ọrụ ebube ekwuputara bụ ụgha. Ahụla m ka ọ na-eme n'onwe ya. Ọ bụghị ihe ọjọọ ma were nwayọ bịaruo nso. Ma mgbe ụfọdụ ịgaghị ịkọwa ihe ndị a. N'ụdị ndị ahụ, achọpụtara m na ụdị mmadụ abụọ dị n'ụwa: ụdị onye hụrụ ihe dị ka nke a wee sị, "Gịnị kpatara Chukwu ga-eji mee ụdị ihe a? Ọ bụrụ na ọ chọrọ igosi ndị ahụ na ya nọnyeere ha, gịnị kpatara na ọ họrọghị ụzọ ọzọ, ma ọ bụ gịnị kpatara na ọ kwụsịghị nje ahụ, ma ọ bụ gịnị kpatara na o meghị ihe dị mma n'anya m? "; na ndị na-ada ikpere na-asị, "Onyenwe m na Chineke m."
← Na post gara aga Gara aga post:Madonna di Giampilieri na-alaghachi anya mmiri: oge ​​mbụ afọ iri atọ gara aga
Ọzọ Post → Post ozo:Okpukpe nke nmebi iwu: aghaghi ime ya ma obu Akwukwo iwu megidere ya?